प्रचण्ड–नेपाल र जसपाको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री ! ओलीविरुद्ध यस्तो खेल - Media Dabali
प्रचण्ड–नेपाल र जसपाको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री ! ओलीविरुद्ध यस्तो खेल
काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सम्बन्ध खटपट हुने देखिएको छ ।
ओलीको पक्षमा लागेका सांसदहरुलाई तान्ने प्रयास विफल भएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले देउवालाई अघि सारेर ओलीलाई पदच्यूत गर्ने भित्री तयारी सुरु भएको छ ।
त्यसैले प्रचण्ड–माधव समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका हुन् । ओलीलाई हटाउने अरु कुनै विकल्प नभएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूह पुगेको हो।
सोमबार बसेको माधव–प्रचण्ड पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रचण्डलाई ओलीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय गर्नुको कारण त्यही भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड नेपाल पक्षमा ८७ र ओली पक्षमा ८३ जना सांसद रहेको बताइन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका दुई जना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन्। बाँकी ६१ जना सांसदले प्रधानमन्त्री चयनमा मतदान गर्न पाउँछन्। जसपाले साथ दिएमा प्रचण्ड–माधव समूहले भोट नहालेमा ओलीले विश्वासको मत गुमाउने अवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लगाउने प्रचण्ड माधव समूहको तयारी छ । हुन त आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्था आए ओली पनि देउवालाई अघि बढाउने पक्षमा रहेको समाचार आइसकेका छन् ।